Dawladda Puntland oo soo bandhigtay qof ka tirsanaan jiray Al-shabaab. – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo soo bandhigtay qof ka tirsanaan jiray Al-shabaab.
Garoowe, Sept, 08- Saraakiisha ammaanka Puntland ayaa maanta saldhiga dhexe ee Garoowe kusoo bandhigey shaqsi dhalinyaro ah oo la sheegey inuu horey uga tirsanaan jirey xarakada Al-shabaab ee ka hawlgala qeybo ka mida koonfurta Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo C/risaaq Axmed Xirsi.
Haddaba habkii uu ururkaasi uga baxay iyo cafis la sheegey inuu u fidiyay madaxweynaha dawladda Puntland Dr: C/raxmaan shiikh Maxamed Maxuud Faroolle ayaa waxaa warfidiyeenada u sharxay Taliye kuxigeenka ciidanka booliska iyo asluubta dawladda Puntland Gaashaanle Sare C/laahi Saalax Maxamed.
Taliyuhu waxaa uu sheegey in madaxweyne Faroole uu cafis u fidiyay saqsiyaad badan oo ururkaasi ka tirsanaa, waxaana uu hadalkiisa raaciyay gaashaanle sare C/laahi Saalax Maxamed iney fursadaan u furuntahay qofkasta oo doonaya inuu ururkaasi isaga baxo.
Ninkaasi dhallinyarada ah C/risaaq Axmed Xirsi ayaa ka hadlay muddadii uu ku jirey Al-shabaab iyo sababta uu uga baxay ururkaasi. Waxaana uu tilmaamey in shaqsi ahaantiisa uu go’aan ku gaarey inuu isaga baxo ururkaasi, markii hore ee uu ka mid noqonayayna aysan jirin cid ku khasabtey ee isagu uu doortey.
Maahan markii ugu horeysey oo saraakiisha ammaanka Puntland ay soo bandhigaan dad la sheegey iney horey uga tirsanaayeen xarakada All-shabaab, waxaana isla saldhiga Garowe maantay lagu soo bandhigey 18 maxbuus oo lagu soo qab-qabtey dagaalkii Gaalkacyo kuwaas oo laamaha ammaanka Puntland ay ku tilmaameen iney qeyb-ka yihiin kooxda Allshabaab ee colaada ka hurineysey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida ay hadalka u dhigeen